Ukubaluleka kweemilo kwilogo kunye nombala wazo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukubaluleka kweemilo kwilogo
Rhoqo, sijonga naluphi na uhlobo lwemveliso okanye ishishini ukuba uza kuba njani umfanekiso walo. Kubonakala ngathi eyona nto ibalulekileyo ihlala ingumbala, kuba isixelela ukuba kuxhomekeke kwishishini, eminye imibala iyasebenza kwaye eminye ayichanekanga. I-Blue ihlala isetyenziselwa amajelo asekuhlaleni. Kwaye kuyinyani. Kodwa ayenzeki ngamabona-ndenzile Luhlaza kunika umbono woxolo, impumelelo, nokhuseleko. Kuxhomekeke kwithoni ikwamisela ubudala babantu abayindwendweleyo. Mhlawumbi olo khuseleko lwenza ukuba uFacebook abe nabaphulaphuli abadala ngakumbi kunoTuenti ngelo xesha. Ukubaluleka kweemilo kufuneka kuthathelwe ingqalelo.
Kodwa imibala ayisiyiyo kuphela into oyifunayo ukuqonda ukwenza umfanekiso. Imilo ibaluleke kakhulu xa usenza ilogo. Kuba uyakufuna abaphulaphuli bakho ngokujonga nje ukukhumbula ukuba ngubani logo abayibonayo kunye nezinto abazithengisayo.
1.3 Imigca ethe tye kwaye ethe nkqo
2 Imithetho esisiseko ye-3 yokwenza uphawu lwakho
2.3 Imibala yokukhetha
Ukuba sibiza amagama njenge-Apple, iMicrosoft, iNike… Ngokuqinisekileyo uyazi ukuba yeyiphi ilogo kwaye umbala wayo awubalulekanga kangako. Kuba enye iya kuba li-apile elilumkileyo, enye isikwere yahlulwe yangamacandelo amane alinganayo enye uphawu olwahlukileyo. Kwaye ngamanye amaxesha, kuxhomekeke kwiminyaka, batshintshe imibala ukubonisa into ethile okanye enye. Kodwa uhlala uhlala kwifom. Uphawu uqobo okanye umyili walo kufuneka enze uphawu oluya kuhlala lukhunjulwa. Obo bubunzima.
Iimo ezahlukeneyo ezinjengeesangqa, oonxantathu, imigca ethe ngqo ... Banokudlulisa imiyalezo eyahlukileyo kwaye kufuneka ulumke ungafumani mvakalelo ezahlukeneyo. Ingcali enkulu kufuneka ixube ezi ntlobo zeefom ukufumana umyalezo othile wohlobo olumeleyo.
Namhlanje, zisetyenziswa kakhulu. Phantse yonke into. Ifoto yeprofayile kunye nezinye iindlela ezahlukeneyo kwisicelo esisetyenziselwa oku. Bacebisa umanyano, amandla kunye nonyamezelo. Umzekelo ocacileyo: Uyilo lweeringi zeOlimpiki. Ukumela ubunye bamazwekazi amahlanu.
Ijika liza kuba nempendulo elungileyo kunye nentuthuzelo. Owona mzekelo ubalaseleyo kweli nqaku yiAmazon. Yeyiphi, ilogo yakho luncumo, kulapho ihlala isetyenziswa khona. Kuba inika ukuziva usondele, ubuhlobo, uthando kunye neemvakalelo ezahlukeneyo ezintle.
Imigca ethe tye kwaye ethe nkqo
Imigca ethe nkqo inika, ngaphezulu kwako konke, ukhuseleko. Ukuzinza, ukomelela kunye nokulingana kubonisiwe ngokuchaneka komgca othe tye. Iilogo ezixhamla kule psychology zihlala ziyimifanekiso yendibaniselwano. Ngale nto bafeza ukuthembeka phambi kwabathengi kunye nokusebenza ngokufanelekileyo. Nangona kunjalo, eminye yale migca kunzima ukuyifezekisa kwaye inokwenzeka ukujiya umyalezo ofuna ukuwunika.
Imigca ethe tyaba ngokuchaseneyo ibonisa ukuzola nokuzola. Uninzi lwazo lusetyenziselwa ukwahlula i-logo kwigama lophawu ukunika uzinzo. Isetyenziselwa ukulwa isoyikiso imigca ethe nkqo. Ukuba ufuna uzinzo kwishishini lakho ngokubhekisele kwilogo, ungasebenzisa ubume begridi ukuyinika ubume obuqinileyo. Ngamanye amaxesha ukuxuba yeyona ndlela ilungileyo yokubonisa ukuthembeka.
Balumkele. Kunzima ukufumana nokugcina kwilogo. Oonxantathu bahlala besetyenziselwa inkolo, umthetho, okanye isayensi, ukukhuthaza amandla. Nangona zikwafumaneka kwiimpawu zentengiso yamadoda kuphela.
Imithetho esisiseko ye-3 yokwenza uphawu lwakho
Ewe, imilo ayisiyiyo kuphela into, ikwangumbala kunye nokwakheka kwayo. Kodwa kuya kufuneka uphumeze uthotho lwemithetho ukuba ufuna iyonke, yonke into ihambelana nento oyifunayo kwaye betha isikhonkwane entloko xa usenza ilogo. Ke siza kubeka ezinye kwitafile Ukwenza icace ukuba ubuncinci, akufuneki uyijonge.
El target o ojolise kubo yeyona nto ibalulekileyo ngaphambi kokubeka umnwe ephepheni. Kuba kuya kufuneka uyazi ukuba luhlobo luni lwabaphulaphuli uphawu lwakho lukukhawulela. Ukuba iyimveliso yabantwana, akufuneki usebenzise imigca ethe nkqo okanye imibala emnyama. Usebenzisa ukufana kunye nemibala eqaqambileyo, kwaye ngokuchaseneyo, ukuba ngabantu abadala. Ukuba abaphulaphuli bakho ojolise kubo babanzi benoluhlu lweminyaka eli-15 ukuya kwengama-40 kuyakufuneka wenze umxube weemilo ezinokuthi zibe sisetyhula okanye isikwere. Ukongeza kwimbala engekho mnyama okanye ukukhanya.
Qaphela oko nantoni na oyenzayo kufuneka ihlale kwi-retina yalowo uyibonayo. Oku kuhlala kulula ukufezekisa nge logo elula. Ngaphandle kwemigca emininzi kunye neskimu esilula. Khumbula ukuba umntu uthi: Ndingayenza nam lonto. Kungenxa yokuba usendleleni elungileyo. Yile ndlela uNike, iAdidas iphumelele… Imifanekiso ekufuneka uyikhumbule.
Khangela uluhlu oluhle lombala kwaye ungazami ukuphuma apho kakhulu. Gcina ukhumbula ukuba ukuba uthatha umbala omthubi noluhlaza okwesibhakabhaka, kuya kuba nzima ngakumbi kunokuba ushenxisa ukungabonakali kohlaza okanye ukongeza. Ukudlala ngombala ofanayo. Kwakhona, amehlo awadinisi kwaye ukuba ishishini lakho liza kuba nohlobo oluthile lwenkxaso kwi-Intanethi, enje ngewebhusayithi okanye usetyenziso lweselfowuni, kuya kuba lula ukudibanisa iwebhusayithi kunye nethoni efanayo kunokuba inezinto ezahlukeneyo. Ke, umbala uya kubaluleka nakubani abatyelela iisayithi zakho, kuba baya kuyidibanisa ngokukhawuleza.
Kuya kufuneka uyisebenzise, ​​ukuba ubungazazi ngaphambili tips kwaye waqala ukuyila ngathi "uphambene" ngoku ungasondela ekufezekiseni. Kwaye okona kubaluleke kakhulu, ungaze uyitshintshe ngokukhawuleza ilogo yakhoUkuba uyayenza, kulapho ke udityanisiwe njengenkampani kwaye wenza ukulungiswa okungenanto yakwenza nokwahlulahlula, kuba kuya kuba nzima kubaphulaphuli bakho ukukhumbula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukubaluleka kweemilo kwilogo
UCarla canavessi sitsho
Ndinomdla kakhulu koko ndikufundileyo.
Phendula u-carla canavessi
Ngubani odale icon yodumo olunoncumo?
Yeyiphi imibuzo ukubuza abathengi ngaphambi kokuba uqale ukuyila ilogo yakho?